Izibalo Zokusebenzisa I-inthanethi 2021: Idatha Ayilali 8.0 | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 1, 2021 NgoMsombuluko, Novemba 1, 2021 UShirley Stark
Ezweni eliba yidijithali ngokwandayo, elibhebhethekiswa ukuvela kwe-COVID-19, le minyaka yethule inkathi entsha lapho ubuchwepheshe nedatha kudlala ingxenye enkulu nebalulekile ezimpilweni zethu zansuku zonke. Kunoma yimuphi umthengisi noma ibhizinisi laphaya, into eyodwa eqinisekile: umthelela wokusetshenziswa kwedatha endaweni yethu yesimanje yedijithali ngokungangabazeki unyukile njengoba sisebunzimeni bobhubhane lwethu lwamanje. Phakathi kokuvalelwa yedwa kanye nokuvalwa okusabalele kwamahhovisi, amabhange, izitolo, izindawo zokudlela, nokunye, umphakathi wakushintsha kakhulu ukuba khona kwawo ku-inthanethi. Njengoba sifunda ukuzivumelanisa nale nkathi entsha, idatha ayilali.
Kodwa-ke, ukubuyisela emuva ezikhathini zangaphambi kwe-covid, inani ledatha elidaliwe nokwabelwana ngalo lase liyakhula, nakuba lihamba kancane. Lokhu kukhombisa ngokuqinisekile ukuthi amathrendi e-inthanethi akhona ukuze ahlale esikhathini esizayo esibonakalayo, futhi ukutholakala kwedatha kuzoqhubeka nokukhula.
Izinkampani ezingama-50% seziqala ukusebenzisa ukuhlaziya idatha kakhulu uma kuqhathaniswa nezikhathi zangaphambi kobhubhane. Lokhu kubandakanya namabhizinisi amancane angaphezu kwama-68%.
Ithuthuke Kangakanani Idatha?
Cishe u-59% wabantu bethu emhlabeni wonke unokufinyelela ku-inthanethi, kuyilapho izigidigidi ezingu-4.57 zingabasebenzisi abasebenzayo - lokhu cishe kukhuphuke ngo-3% kusukela onyakeni odlule okungukuthi u-2019. Phakathi kwalezo zinombolo, abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-4.2 bangabasebenzisi beselula abasebenzayo kuyilapho abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-3.81 basebenzisa izinkundla zokuxhumana.
Umbiko weSimo Sesikhungo Sedatha wango-2021
Uma kubhekwa ukuthi i-COVID-19 isinikeze kanjani ukufinyelela kubasebenzi abakude abakhudlwana, singasho ngokuphepha ukuthi ikusasa lomsebenzi wethu selifikile, futhi liqala ekhaya! – Okungenani okwamanje. Enye indlela yokubuka lesi silinganiso yilena elandelayo:
Okwamanje, ikusasa lomsebenzi lisekhaya. Ngaphambi kokuvalelwa yedwa, cishe i-15% yabantu baseMelika ibisebenza ekhaya. Manje sekuyahlolwa ukuthi iphesenti selikhule lafika ku-50%, okuyizindaba ezinhle ezinkundleni zokuxhumana ezifana Amaqembu e-Microsoft, enesilinganiso sabantu abangu-52,083 abajoyina ngomzuzu.
Zoom, ibhizinisi lenkomfa ngevidiyo, libone ukwanda okukhulu kubasebenzisi. Izikhathi zabo zohlelo lokusebenza zansuku zonke zikhuphuke zisuka ngaphezudlwana kwezigidi ezimbili ngoFebhuwari zaya cishe ezigidini eziyisikhombisa ngoMashi, ngesilinganiso sabantu abangu-208,333 abahlangana umzuzu ngamunye.
Abantu abangakwazi ukuhlanganyela nabo mathupha bayanda ukusebenzisa ingxoxo yevidiyo. Phakathi kukaJanuwari noMashi, I-Google Duo ukusetshenziswa kukhuphuke ngamaphesenti ayi-12.4, futhi cishe abantu abangama-27,778 bahlangana kuSkype ngomzuzu.
Kusukela kuqale ukubheduka, WhatsApp, ephethwe yi-Facebook, ibone ukwanda kokusetshenziswa ngamaphesenti angama-51.
Ngomzuzu ngamunye odlulayo, inani ledatha landa kakhulu; manje, lokhu kuhumushela ezithombeni ezingaba ngu-140k ezithunyelwe abasebenzisi kulowo mzuzu, futhi lokho kuvuliwe Facebook.
Amafemu azimele afana ne-Facebook ne-Amazon, nokho, akuzona zodwa ezinedatha. Ngisho nohulumeni basebenzisa idatha, isibonelo esibonakala kakhulu uhlelo lokusebenza lokulandela umkhondo, okwazisa abantu uma besaseduze nomuntu one-COVID-19.
Lokhu kusho ukuthi idatha manje ayibonisi izinkomba zokuncipha ekukhuleni kwayo, futhi kunezibalo zokuxhasa lesi simangalo. Lezi zibalo cishe ngeke zehle noma nini maduze, futhi zibikezelwa ukuthi zizokhuphuka kuphela njengoba inani labantu abaku-inthanethi likhula ngokuhamba kwesikhathi.
Kunengxoxo yevidiyo yokuzijabulisa, izinsiza zokulethwa kwe-smartphone yoku-oda noma yiluphi uhlobo lwento, izinhlelo zokusebenza zokusakaza ividiyo zokuzijabulisa, nokunye. Ngenxa yalokho, idatha ikhiqizwa ngokuqhubekayo ngokuchofoza izikhangiso, ukwabelana kwemidiya, ukusabela kwenkundla yezokuxhumana, ukuthengiselana, ukugibela, ukusakaza okuqukethwe, nokuningi.
Kungakanani Ukukhiqizwa Kwedatha okwenzeka Ngawo Wonke Umzuzu?
Khumbula ukuthi idatha ikhiqizwa njalo ngeminithi. Ake sibheke idatha yakamuva yokuthi ingakanani idatha ekhiqizwa ngomzuzu wedijithali. Ukuqala ngezinombolo ezithile esigabeni sokuzijabulisa:
Ngekota yokuqala, enye yenkundla yokusakaza ku-inthanethi eya ngokuya idumile Netflix yengeze amakhasimende amasha angu-15.8 million, okuwukunyuka kwezimoto ngamaphesenti angu-16 kusukela ngoJanuwari kuya kuMashi. Iphinde iqoqe cishe amahora angama-404,444 wokusakazwa kwevidiyo
Intandokazi yakho I-YouTubers layisha cishe amahora angama-500 wevidiyo
Inkundla edumile yokudala nokwabelana ngamavidiyo I-Tiktok ifakwa izikhathi ezingaba ngu-2,704
Ukuqeda lesi sigaba ngamaculo athile Spotify lokho kungeza amathrekhi alinganiselwa ku-28 kulabhulali yayo
Ukuqhubekela phambili ezinkundleni zokuxhumana, okuyingxenye eyisisekelo nedume kakhulu emphakathini wethu waku-inthanethi.
Instagram, inethiwekhi yokwabelana ebonakalayo evelele kakhulu emhlabeni, inokuthunyelwe kwabasebenzisi abangu-347,222 ezindabeni zayo kuphela, nokushaya okungu-138,889 ezikhangisweni zephrofayela yenkampani yayo.
Twitter yengeza cishe amalungu amasha angama-319, igcina umfutho wayo ngamameme nezinkulumo mpikiswano zezepolitiki.
Facebook abasebenzisi - kungakhathaliseki ukuthi izinkulungwane zeminyaka, ama-boomers, noma i-Gen Z - bayaqhubeka nokwabelana ngemilayezo engaba ngu-150,000 nezithombe ezilinganiselwa ku-147,000 enkundleni yezokuxhumana edume kakhulu.
Mayelana nokuxhumana, izinombolo zikhuphuke kakhulu kusukela esikhathini sangaphambi kwe-covid:
Inkundla yokuxhumana evelayo Amaqembu e-Microsoft axhuma abasebenzisi abangaba ngu-52,083
Isilinganiso senani labantu abangaba ngu-1,388,889 abenza izingcingo zevidiyo nezezwi
Enye yenkundla yemiyalezo esetshenziswa kakhulu i-WhatsApp inabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezi-2 ababelana ngemiyalezo eyi-41,666,667.
Uhlelo lokusebenza olunikeza ividiyo i-Zoom isingatha ababambiqhaza abangu-208,333 emihlanganweni
Izindaba ze-viral kanye nenkundla yokwabelana ngokuqukethwe i-Reddit ibona abantu abangaba ngu-479,452 abazibandakanya nokuqukethwe
Ngenkathi inkundla egxile emsebenzini i-LinkedIn inabasebenzisi abafake izicelo zemisebenzi engama-69,444
Kodwa, ukubeka idatha eceleni okwesikhashana, kuthiwani ngemali esetshenziswa njalo ngomzuzu ku-inthanethi? Abathengi kulindeleke ukuthi basebenzise cishe u-$1 million ku-inthanethi.
Ngaphezu kwalokho, Venmo abasebenzisi badlulisa ngaphezu kuka-$200k ezinkokhelweni, ngemali engaphezu kuka-$3000 echithwa ezinhlelweni zokusebenza zeselula.
Amazon, inkampani evelele yokukhangisa ku-inthanethi, ithumela izimpahla ezingu-6,659 ngosuku (e-US kuphela). Ngaleso sikhathi, ukulethwa ku-inthanethi & nenkundla yokukhipha ukudla kwase-Doordash i-oda cishe ukudla okungu-555.
Njengoba umphakathi wethu uthuthuka, amabhizinisi kufanele azivumelanise nezimo, okuyinto cishe njalo edinga ukusetshenziswa kwedatha. Konke ukuswayipha, ukuchofoza, ukuthanda, noma ukwabelana kunomthelela kusizindalwazi esikhudlwana, okungaholela ekutholweni kwezidingo zamaklayenti akho. Ngenxa yalokho, lapho lezi zinombolo zihlolwa ngokucophelela, ukwaziswa okuzuziwe kungasiza ekuqondeni okungcono kakhulu kwezwe elihamba ngesivinini esikhulu. Ngenxa ye-COVID-19, amafemu amaningi asebenza ngendlela ehlukile, futhi ukuba nedatha yesikhathi sangempela mayelana nokusebenza kwawo kanye nendawo ezungezile kungawenza akwazi ukwenza izinqumo ezingcono ukuze aphile, futhi achume, ekuphenduleni.
Tags: 2021abasebenzisi be-inthanethi abasebenzayoAmazonFacebookgoogle duoinfographicizibalo ze-instagramabasebenzisi be-inthanethi beselulaizibalo ze-inthanethiukusetshenziswa kwe-inthanethiizibalo zokusebenzisa i-inthanethiAmaqembu e-Microsoftumqondoizibalo zokuxhumana nabantuisimo se-bi kanye nezibaloisimo sesikhungo sedathaidatha ayilaliIzibalo ze-twittervenmoamakholi wevidiyoizingcingo zezwiizibalo ze-youtubezoom
U-Shirley Stark njengamanje usebenza kwa-InfoCleance njengoMholi Wethimba Lezokumaketha. Unolwazi olusebenzayo ekukhangiseni kwe-B2B futhi uthanda ukubhala amabhulogi, amathiphu, ukufunda izindatshana ze-b2b, Ukudala amasu eBhizinisi nokuhamba.